Khuphela imifanekiso yamaphephadonga entsha ye-Samsung Galaxy A7 | I-Androidsis
Khuphela imifanekiso yamaphephadonga entsha ye-Samsung Galaxy A7
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, inkampani yaseKorea yazisa ngokusemthethweni ukuzibophelela kwayo kwii-smartphones zeekhamera ezi-3, nangona ayizukuphela kwayo kule nto, kuba njengoko ndikwazise kwinqaku lam elidlulileyo, iSamsung ilungiselela i-Galaxy A9, i-smartphone yokuqala yenkampani ngenkqubo yeekhamera ezi-4.
Njengesiqhelo, sele sinazo wallpapers ezintsha ezivela esandleni se-Samsung Galaxy A7. Njengabavelisi abaninzi, nangona ngakumbi i-Samsung ibalaselisa umgangatho wezikrini zayo, imifanekiso isibonisa ngemibala emininzi ebonisa iimilo ezingabonakaliyo. Ukuba ufuna ukonwabela le mifanekiso kwisiphelo sakho, siya kukubonisa indlela yokukhuphela.
Abafana abavela eSammobile, babeke kwindawo yethu kwiwebhusayithi yabo, Isiphelo 8 I-HD 3D yamaphephadonga ezivela kwisiphelo sendlela entsha evela kwinkampani yaseKorea. Ukwenza kube lula kuwe ukuba uyikhuphele kwi-smartphone yakho, ithebhulethi okanye kwikhompyuter, emva koko sikushiya igalari apho ungazifumana zonke. Yonke imifanekiso ikwisisombululo sayo santlandlolo, 2.200 × 2.200, ke ngoko, sinokuyilungelelanisa kwisiphelo sethu ngaphandle kwengxaki, nokuba isisombululo sayo
I-Samsung Galaxy A7 entsha yindawo yokuqala ye-Samsung ukuya kwintengiso ngeekhamera ezi-3. Isikrini sesiphelo sifikelela kwi I-intshi ezi-6 kwaye inesisombululo esigcweleyo se-HD + ngetekhnoloji ye-Super AMOLED. Ngaphakathi, sifumana, ngokweenguqulelo ezimbini ze-4/6 GB ye-RAM kunye ne-64/128 GB yokugcina ngaphakathi. Ibhetri ifikelela kwi-3000 mAh kwaye ilawulwa yi-Android Oreo, eyona nto iphambili kuyo, ngaphandle kokuba i-Samsung iceba ukuvuselela le ndawo ngokukhawuleza, into ebonwa yimbali yenkampani yaseKorea kule meko, ayinakulindeleka.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Samsung » Khuphela imifanekiso yamaphephadonga entsha ye-Samsung Galaxy A7
Makhe sihlolisise iiStratical Rage 2: inqindi ecocekileyo eneAxel kunye neBlaze kwiselfowuni
Ityhilwe amanqaku apheleleyo e-Oppo A7: 6.2 "HD + Display, SD450 kunye nokunye